Ubuntu တင်ပြီး ဘာဆက်လုပ်မလဲ ?? - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Ubuntu တင်ပြီး ဘာဆက်လုပ်မလဲ ??
17-07-2010, 10:19 PM
Ubuntu အကြောင်းနားထားတာ တော်တော်လေးတောင် ကြာသွားပါပြီ - ကျွန်တော်လည်း ဖိုရမ်က တစ်ခြား ကိစ္စလေးတွေ ဘက် လှည့်နေမိတာရယ် - စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့ လုပ်ချင်စိတ် ရှိတာလေးတွေရယ်နောက်ကို လိုက်လုပ်နေမိတာရယ်ကြောင့် ဒီဘက်ကို ပြန်မလှည့်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ခု ကျွန်တော် ပြန်လှည့်ပါတော့မယ်။ အရင် အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်လို ရေးခဲ့တဲ့ အားလုံးအတွက် Ubuntu ( Linux ) ပြီးခဲ့တဲ့ နောက်မှာ အခု နောက်ထပ် အခန်းဆက် Ubuntu တစ်ပုဒ် ဆက်ပါဦးမယ်။
တကယ်တမ်း ဒီအကြောင်းအရာက ရေးတာ တော်တော်လေး နောက်ကျနေပြီလို့တောင် ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆို နောက် (4) လပိုင်းဆိုရင် Ubuntu version က အသစ်ထွက်တော့မှာပါ တကယ်တော့ Ubuntu 11.04 ထွက်လာလည်း ဒီနည်းတွေ ဒီ Software တွေ ဒီ install လုပ်ဆောင်နည်းတွေ နဲ့ပဲ လုပ်ဆောင်နေရဦးမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် ပြောချင်တာ အကြောင်းအရာရပ်တစ်ခုကို နားလည်မှုနဲ့ ဆက်စပ်တွေးခေါ် နိုင်မှုကိုပဲ ဦးစားပေးပါ။ ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီး သုံးလို့ မရတော့ဘူးလို့ မတွေးပါနဲ့ - အသစ်တစ်ခု ပေါ်လာလို့ ဒီ အကြောင်းအရာ က အဟောင်းဖြစ်ကောင်း ဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ့် အဲ့ဒီ့ အကြောင်းအရာသစ်ဟာ ဒီအကြောင်းအရာ ဟောင်းပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ဆင့်ပွားတိုးတက်သွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Version တစ်ခုမက ကွာသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် ဒီစာတွေက အများကြီး ကွာခြားသွားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဦးစွာ အသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။
အရင် အားလုံးအတွက် Ubuntu Linux မှာ Ubuntu 10.04, Lucid Lynx ကို ဘယ်လို install လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပေးပြီး ဖြစ်လို့ ခု အခြေအနေမှာ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ Ubuntu 10.04, Lucid Lynx ကို စာဖတ်သူရဲ့ စက်မှာ installed လုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီလို့ ယူဆလိုက်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒီ guide ကနေပြီး Ubuntu installed လုပ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့ နောက်မှာ beginners တွေအတွက် မသိမဖြစ်လေ့လာထားသင့်တဲ့ concepts အသစ်တွေ အကြောင်းနဲ့ Ubuntu ကို အသုံးပြုသူတိုင်း အတွက် ရွေးချယ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး software တွေအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပြီး စမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်ပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာ အားလုံးဟာ Ubuntu အား တီးမိခေါက်မိ မရှိသေးသူများ အတွက် အခြေခံအကျဆုံး အကြောင်းအရာများကို အသားပေး ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်လို့ မိမိသိလိုတဲ့ အကြောင်းအရာများ မပါရှိခဲ့ဘူး ဆိုရင် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြဖို့ ကြိုတင်အသိပေးလိုပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာကို မဖတ်ခင်မှာ တွဲစပ်ပြီး လေ့လာစေချင်တဲ့ ခေါင်းစဉ် ခြောက်ခု ရှိပါတယ်။ အဲ့ ခေါင်းစဉ် ခြောက်ခု ကတော့ -
အားလုံးအတွက် Ubuntu ( Linux )
Software installation in Ubuntu 10.04 LTS
ပြောင်းလဲနိုင်သော Ubuntu applications များ
Windows ပေါ်မှာ Ubuntulinux ကို ဘယ်လို Install လုပ်ပြီး run မလဲ။ နဲ့
အသင့်တော်ဆုံး Linux OS အား ရွေးချယ်ခြင်း ဆိုတဲ့
ခေါင်းစဉ်တွေပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီ့ ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ အကြောင်းအရာ ( ၃ ) ခုနဲ့ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့က ဆက်စပ်နေပြီး ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ အားလုံးကို အသေးစိတ် ပြန်ချုံပြီး ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ အကြောင်းအရာ အားလုံးနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ မေးခွန်း အတိုအထွာတွေ - မေးမြန်းချင်စိတ် ပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အမေးအဖြေများနှင့် Ubuntu ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ မေးမြန်းပေးကြဖို့ တစ်လက်စတည်း အကြံပြုလိုပါတယ်။
အရင် အကြောင်းအရာတွေမှာ ဖော်ပြနေကျပုံစံအတိုင်း အကြောင်းအရာတစ်ခု ရေးသားပြီးတိုင်းမှာ ဒီနေရာကနေ သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်ခွဲတိုင်းကို Links များချိတ်ဆက် ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
( ၁ ) Applications များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း
( ၂ ) အခြေခံ အကြောင်းအရာများ ( ၁ )
( ၃ ) အခြေခံ အကြောင်းအရာများ ( ၂ )
( ၄ ) မျက်စိအလှ ပသာဒ
( ၅ ) Desktop တန်ဖိုးမြှင့်တင်ခြင်း
( ၆ ) ဖျော်ဖြေရေး - မျှဝေရေး - ပြင်ဆင်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကဏ္ဍများ ( နိဂုံး )
Applications များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း
Ubuntu မှာ Software တွေ ရယူသုံးစွဲနိုင်မယ့် directories တွေကို Repositories ( repos ) လို့ ခေါ်ပြီး အဲ့ဒီ့ Repositories ကနေတစ်ဆင့် ကိုယ့်ရဲ့ System တစ်ခုလုံးမှာ ရှိနေတဲ့ Software အားလုံးကို အမြဲတမ်း up-to-date ဖြစ်နေအောင် စစ်ဆေးပေးနေပါတယ်။ ဒါတင်မက ကိုယ်အသုံးချဖို့ လိုအပ်လာတဲ့ applications အသီးသီးကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ catalog အမျိုးမျိုးကနေ အလွယ်တကူ install လုပ်လို့ ရနိုင်အောင် Security အကောင်းဆုံးနဲ့ ဖြန့်ဝေပေးနေပါသေးတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အင်တာနက်ထဲဝင်ပြီး ကိုယ့် System up-to-date ဖြစ်ဖို့ latest versions တွေ ရှာနေရတာထက် စာရင် Repositories ရှိနေတာ ကျွန်တော်တို့အတွက် တော်တော်လေး သက်သာတယ်လို့ ဆိုလို့ ရပါတယ်။ Ubuntu မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် default repos အနည်းငယ်ရှိပြီး တကယ်လို့ ကိုယ်က အကြောင်းပြချက်နှစ်မျိုးနဲ့ တစ်ခြား repos တွေကို add ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာအကြောင်းပြချက်များလဲ ?? တကယ်လို့ ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ Software ဟာ Ubuntu ရဲ့ repos ထဲမှာ Default အနေနဲ့ မပါရှိခဲ့ဘူး ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် Ubuntu version အသစ်ထွက်မှ ပါဝင်လာမယ့် software တွေရဲ့ Versions အသစ်တွေကို Ubuntu version အသစ်မထွက်ခင် အသုံးပြုချင်တဲ့ အခါမှာ ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခြား repos တွေကို လက်ရှိရယူအသုံးပြုနေတဲ့ Ubuntu ရဲ့ Software Sources ထဲမှာ ထပ် add ပြီး အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
Repositories တွေကို Software Sources ထဲမှာ add ချင်တယ် ဆိုရင် ( System > Administration > Software Sources ) ကိုသွားပြီး "Other Software" tab ထဲမှာရှိနေတဲ့ "Add..." button ကနေတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ APT line ကို ထည့်သွင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြသွားမယ့် Software တွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ Personal Package Archives (PPA) တွေကို ရည်ညွှန်းတဲ့ APT lines တွေကို သက်ဆိုင်ရာ Software တွေအလိုက် ပူးတွဲ ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ထဲမှာ installed လုပ်ထားတဲ့ apps တွေကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် - apps တွေ ထပ်ထည့်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် - ထည့်ထားပြီးသား apps တွေ ပြန်ဖြုတ်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းကနေ လုပ်ဆောင်နိုင်တာ Ubuntu Software Center (Applications > Ubuntu Software Center) ပါ။ Ubuntu Software Center ကနေ ကိုယ်လိုနေတဲ့ Software ကို ရှာရတာ အလွန်လွယ်ကူတဲ့ အပြင် Download လုပ် install လုပ်ဆောင်ရတာကလည်း click တစ်ချက်ပေးယုံနဲ့ ပြီးပြည့်စုံစေပါတယ်။
ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ Software တွေကို ရှာဖွေတဲ့ နေရာမှာ နောက်တစ်နည်း အနေနဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်က Search bar မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Software နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ် install လုပ်မယ့် Software ရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်ကို install မလုပ်ဆောင်ခင် သိချင်သေးတယ် ဆိုရင် result ပေါ်မှာ double click ပေးပြီးတော့ ဖြစ်စေ "More Info" button ကို click ပေးပြီးတော့ ဖြစ်စေ application ရဲ့ အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်ကို ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Install button ကို နှိပ်လိုက်ရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Software ကို အလိုလျောက် install လုပ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
Software တစ်ခုခုကို အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း installed လုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ Program တော်တော်များများကို Menu bar က Applications ရဲ့ အောက်မှာ အသင့်ခေါ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပြီး တစ်ချို့ Applications တွေကတော့ (System > Preferences) အောက်မှာဖြစ်စေ သို့တည်းမဟုတ် (System > Administration) အောက်မှာ ဖြစ်စေ ရောက်ရှိသွားတတ်ပါတယ်။
ဒီနည်းနဲ့မှ မဟုတ်ပဲ package တွေကို နောက်နည်းအနေနဲ့ Synaptic Package Manager (System > Administration > Synaptic Package Manager) ကနေ install လုပ်ဆောင်လို့ ရသလို အဲလိုမှ မဟုတ်ရင်လည်း Terminal ထဲက (Applications > Accessories > Terminal) ထဲကနေ သာမန် command လောက်နဲ့ install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
Last edited by KznT; 22-11-2010 at 01:16 AM..
ကိုကိုသီဟ, ကိုစံငြိမ်း, ကိုဦး, ယွန်းယွန်း, လမ်းပြကြယ်, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသူအောင်, ဇေယျာအေး, bonge, hellboy, ko lin, kyaukphyu, lu soe, minthumon, phoelapyaee, PyaitSone, sAnDViper, tu tu, yawnathan
ပြန်စာ - Ubuntu တင်ပြီး ဘာဆက်လုပ်မလဲ ??
အခြေခံ အကြောင်းအရာများ ( ၁ )
Mirror နှင့် Updates လုပ်ဆောင်မှုများ အကြောင်း
စိတ်ကူးတည့်ရာလေးတွေ ရေးနေတာ ဒီအကြောင်းအရာကို ဆက်ဖို့ မေ့နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ အကြောင်းအရာသစ်လေး ဆက်ပါဦးမယ်။
Ubuntu က တင်ဆက်လိုက်တဲ့ ( Beta, Release Candidate, နောက် အထူးသဖြင့် Final ) Release တွေထွက်ရှိလာပြီးတဲ့ နောက်မှာ Ubuntu ရဲ့ official servers တွေက အလိုလိုနေရင်း နှေးကွေးလေးလံ သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Updates ပေးဖို့ Download ချဖို့နဲ့ ပတ်သတ်ရင် သုံးသင့်တာ Official servers အစား တစ်ခြား server တစ်ခုကို ရွေးချယ် အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ အဲလို တစ်ခြား Server တစ်ခုကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အတွက် ဆိုရင် Software Sources တည်ရှိရာ ( System > Administration > Software Sources ) ကို သွားပြီး Download from:" ရဲ့ဘေးက Drop-down menu ကနေ "Other..." ကိုရွေးပေးပါ။
အဲလို လုပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူကနေပြီး "ChooseaDownload Server" window ဆိုတဲ့ pop up window တစ်ခု တက်လာပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က ကိုယ်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး local server ထဲက မြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ Server ကို သိထားတယ်ဆိုရင် သူပြထားတဲ့ list ထဲကနေ ရွေးပေးလိုက်ယုံပါပဲ။ တကယ်လို့ ဘယ် server က ကောင်းမှန်း တိတိကျကျ မသိဘူး မရွေးပေးတတ်ဘူးဆိုရင် ညာဘက်ခြမ်းက "Select Best Server" button ကို click ပေးလိုက်ပါ။
သူ့ကို click ပေးလိုက်ရင် Servers တွေထဲက ဘယ် Server က အမြန်ဆုံး connection ရှိမလဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးမယ့် tool တစ်ခု ပေါ်လာပြီး Download test တွေသူ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အားလုံး ပြီးသွားရင်တော့ သူဖော်ပြထားတဲ့ အမြန်ဆုံး Server ကို "Choose server" button ကနေ ရွေးပေးလိုက်ယုံပါပဲ။
ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲ နောက်ထပ် "Updates" tab ကနေ လုပ်ဆောင်လို့ ရပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က Ubuntu က ထုတ်တဲ့ နောက်ဆုံး version နဲ့ third-party repos တွေကို စက်မှာ run သုံးနေတဲ့ သူတွေ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အတွက် ဖြစ်သင့်တာက "Updates" tab အောက်မှာ ဘာမှ မပြင်ဆင်ပဲ သူ ပေးထားတဲ့ defaults အတိုင်းလေးပဲ ထားတာ ကောင်းပါတယ်။ အဲမှာ မြင်နေရတဲ့ "Unsupported Updates (lucid-backports)" ဆိုတာကကျတော့ အသစ်တော့ အသစ်- ဒါပေမယ့် unsupported versions packages တွေကို ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်ရင် အသုံးပြုနိုင်အောင် အကြံပေးခိုင်းစေတဲ့ options တစ်ခုပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ်က စမ်းသပ်ရတာ ဝါသနာပါတယ်။ ဒီ Options ကို ရွေးချယ်ထားခြင်းအားဖြင့် Repository ထဲကို ထည့်သွင်းဖို့ ပြည့်ပြည့်ဝဝ မစမ်းသပ်ရသေးတဲ့ new features တွေ new interfaces တွေပါဝင်တဲ့ packages အသစ်အသစ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ "Pre-released Updates (lucid-proposed)" ဆိုတာကတော့ Updates တွေကို စမ်းသပ်တဲ့ ဖို့ Options ပါ။ ဘယ်လို လူမျိုးတွေ အတွက်လည်း ဆိုရင် Ubuntu က ထုတ်လိုက်တဲ့ Updates တွေကို စမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်ဖို့လည်း ဝါသနာပါပြီး ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး တွေ့ရှိရတဲ့ အပြစ် အနာအဆာတွေကို ဝေဖန်ထောက်ပြ ပေးချင်တဲ့ သူများ စမ်းသပ်သုံးစွဲနိုင်ဖို့ ထည့်သွင်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော်တို့ Check ပေးထားမယ် ဆိုရင် Ubuntu ကနေ ထွက်လာသမျှ Updates အားလုံးကို နောက်ကွယ်ကနေ အလိုလျောက် Updates လုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းထားသင့်တာက "Show new distribution releases" မှာ နောက်ထပ် Ubuntu version အသစ်ထွက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ သိနိုင်အောင် Long Term Support (LTS) release အစား "Normal releases" ကို ပြောင်းထား သင့်ပါတယ်။
အဲလို ပြောင်းထားခြင်း အားဖြင့် နောက်ထပ် LTS release ထွက်တဲ့ အချိန်ထိ စောင့်ဖို့ မလိုတော့ပဲ Ubuntu version အသစ်ထွက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ချက်ချင်း သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ထားသင့်တာလေး တစ်ခုလည်း အကြံပြုချင်ပါသေးတယ်။ တစ်ခြား ဘာမှ မလုပ်ဆောင်သေးခင် အောက်မှာ မြင်နေရတဲ့ အတိုင်း "Statistics" tab ကို သွားပြီး Check box မှာ Check ပေးထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ဆောင်ထားခြင်း အားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ စက်မှာ installed လုပ်ထားတဲ့ Software တွေထဲက ဘယ် Software ကိုတော့ဖြင့် ကိုယ် အမှန်တကယ်သုံးသလဲ - ဘယ်လောက်ကြာမှာ တစ်ခါ အသုံးပြုလေ့ ရှိသလဲ ဆိုတာ သူက စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး နောက်ကွယ်ကနေ Ubuntu Project ကို အနည်းဆုံး တစ်ပတ်တစ်ခါလောက် သတင်းပို့လွှတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ထားခြင်း အားဖြင့် Ubuntu Project က ဘယ် Software ကို Users တွေပိုပြီး အသုံးများကြလဲ ဆိုတာ သတိထားနိုင်ပြီး အဲ့ကောင်ကို ကောင်းသထက် ကောင်းအောင် ပြင်ဆင်ပေးသွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီကနေ ကျွန်တော်တို့ Close ကို click လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တဲ့ အတိုင်း Software တွေ Updates တွေ ရယူနိုင်ဖို့ Reload လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ Reload ကို click လိုက်ပါ။
Reloading ပြီးလို့ Available updates တွေ သူဖော်ပြပြီ ဆိုရင် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်လုပ်ပြီး install လုပ်ဆောင်သွားယုံပါပဲ။
အဲလိုမှ မလုပ်ချင်လည်း Updates တွေကို နောက်တော့မှ Update Manager ကနေတစ်ဆင့် ( System > Administration > Update Manager ) သွားပြီး Check လုပ်ခိုင်းလို့ ရပါတယ်။ ကိုယ့် Computer ကို up-to-date ဖြစ်အောင် လုပ်ထားဖို့ ကျွန်တော်ကတော့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
Last edited by KznT; 12-11-2010 at 04:43 PM..
!!phyowai!!, ကိုစိန်လေး, ကိုဦး, မင်းနိင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသူအောင်, ဇေယျာအေး, အောင်လံလေး, bonge, hellboy, ko lin, kozaw.dagon, kyaukphyu, lu soe, minthumon, ooooko, phoelapyaee, phonemyatko, PyaitSone, sAnDViper, tu tu
အခြေခံ အကြောင်းအရာများ ( ၂ )
Folder နှင့် Printer များ Sharing လုပ်ဆောင်ခြင်း
ကျွန်တော် မဆက်တာ ကြာနေတဲ့ အကြောင်းအရာလေး ပြန်ဆက်လိုက်ပါဦးမယ်။ ဒီတစ်ခါ ဆက်သွားမှာ Ubuntu မှာ Windows လိုမျိုး Folder တွေ Printer တွေ Share လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် လိုအပ်မယ့် ပြင်ဆင်မှုလေးတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ အကြောင်းပါ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ Ubuntu ကို Windows machines တွေနဲ့ files တွေ folders တွေ share လုပ်ချင်ပြီ ဆိုရင် Samba ရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။
Samba ကို install လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်ရာ folder တစ်ခုခုမှာ right click ထောက်ပြီး "Properties" ကနေ တစ်ဆင့် "Share" tab ကို သွားပါမယ်။
ဖော်ပြပါ အတိုင်း "Share this folder" မှာ Check ပေးလိုက်ရင် Windows networks sharing service ကို install လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို အသိပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲတာကို installed လုပ်ဆောင်ပြီးသွားတာနဲ့ Restart ပေးပြီး ကိုယ် Share ပေးချင်တဲ့ folders တွေ files တွေကို Network ပေါ်မှာ Share ပေးလို့ရပါပြီ။
Samba ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ Ubuntu မှာ ကွန်ပြူတာမှာ ရှိနေတဲ့ အချိန်ကို servers တွေမှာ ရှိနေတဲ့ atomic clocks တွေအတိုင်း တပြေးညီ ချိန်ညှိပေးထားနိုင်အောင် Time Synchronization လုပ်ဆောင်ထားလို့ ရပါတယ်။
သူ့ကို ကျွန်တော်တို့က Network Time Protocol (NTP) လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ NTP time ကို set up လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် System > Administration > Time & Date ကနေ Time & Date ကို အရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။ Settings ကို ဖွင့်ဖို့ အတွက် keys ပုံစံလေးကို click ပေးပါ။ အဲဒီကနေ ကိုယ့်ရဲ့ time zone ကိုရွေးပေးပြီး ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း "Keep synchronized with Internet servers" ကို ထားပေးလိုက်ပါ။ အဲလို ထားပေးလိုက်တာနဲ့ NTP ကို install လုပ်ဖို့ သူ အသိပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့ကနေ install လုပ်ဆောင်သွားပါ။
NTP ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
အဲတာ ပြီးသွားရင် "Select Servers" ကို click ပေးပြီး country zone ကို ရွေးချယ်ဖို့ အတွက် ဒီနေရာကို သွားပါ။ အဲ့နေရာကနေ ကိုယ့် country zone ရဲ့ address ကို ရွေးချယ်ပေးပြီး အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လွတ်နေတဲ့ ကွက်လပ်မှာ ဖြည့် ပြီးရင် "Add" button ကို နှိပ်ပါ။ နောက် သူ့ကို check ပေးပြီး close နိုင်ပါပြီ။
Last edited by KznT; 12-11-2010 at 04:45 PM..
ယွန်းယွန်း, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသူအောင်, ဇေယျာအေး, ဖြိုးယံလေး, bonge, hellboy, kyaukphyu, lu soe, minthumon, phoelapyaee, phonemyatko, PyaitSone, sailay, sAnDViper
GNOME desktop ရဲ့ နောက်ထွက် version ဖြစ်တဲ့ GNOME desktop environment version 3.0 မှာ GNOME Shell ကို သုံးထားပါတယ်။ သူက အရင် Desktop တွေနဲ့ မတူတဲ့ new interface ပါ။ ဒါ့ကြောင့် စမ်းသပ်ကြည့်ချင်မယ် ဆိုရင် Ubuntu repos ထဲမှာ version တစ်ခု ရှိပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ပုံကတော့ Alt+F2 ကနေပြီး "Run Applicatoin" ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ နောက် ပုံမှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း "gnome-shell --replace" ကို ထည့်ပေးပြီး Run ကို နှိပ်ပါ။ တကယ်လို့ အရင်လို ပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနည်းအတိုင်းကိုပဲ စာသား ပြန်ပြောင်းထည့်ပေးရပါမယ်။ ထည့်ရမယ့် စာသားက "metacity --replace" ပါ။
gnome-shell ကို ဒီနေရာကနေလည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော် compizconfig-settings-manager အကြောင်းကို ဒီနေရာမှာ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် compizconfig-settings-manager ဆိုတာ တော်တော်ကြီးကို features တွေ effects တွေများပြီး ကြီးကျယ်တဲ့ software ပါ။ တစ်ချို့လူတွေက အရမ်း visual effects များတာကို ကြိုက်ပေမယ့် တစ်ချို့လူတွေ အတွက်ကျတော့လည်း အဲလောက်ကြီးထိ visual effects များတာကို သဘောမကျပါဘူး - ဒါတင်မက visual effects ကောင်းကောင်း သုံးနိုင်ဖို့ ဆိုရင် Compiz လိုဟာမျိုးက accelerated graphics ဖြစ်ဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နဂိုရှိပြီးသား Hardware အခြေခံလေးနဲ့ပဲ လှလှပပလေး သုံးချင်တယ် - ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်စက်မှာ accelerated graphics ရှိပေမယ့် system resources တွေကို အများကြီး မသုံးချင်ပဲ ပုံမှန်လေး အတိုင်း အလှဆင်ချင်တယ် ဆိုတဲ့ အခါမျိုးမှာ GNOME အတွက် default window manager ဖြစ်တဲ့ Metacity သုံးဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ သူ့ကို graphically enable ပေးလို့ ရသလို command နဲ့လည်း လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။ သိထားဖို့ တစ်ခုက Metacity ကို သုံးမယ်ဆိုရင် Compiz installed လုပ်ထားသူ တစ်ယောက် အတွက် Compiz effects ကို disable ပေးထားဖို့လိုပါတယ်။
Graphically enable ပေးဖို့အတွက် Alt+F2 ကိုနှိပ်ပြီး "Run Applicatoin" dialog မှာ "gconf-editor" ဆိုတာကို ရိုက်ထည့်ပါ။ အဲလိုဆိုရင် GNOME Configuration Editor ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲကနေ ဘယ်ဘက် sidebar ကိုကြည့်ပြီး Apps > metacity > general ကိုသွားပါ။ တွေ့ပြီဆိုရင် ညာဘက်က main box ထဲမှာရှိတဲ့ "compositing_manager" ကို check လုပ်ပါ။ အဲလိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ effect တွေ ချက်ချင်းရလာပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ Terminal နဲ့ လုပ်ဆောင်ချင်သူတွေ အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ command နဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Desktop အား အဆင့်မြင့် အလှဆင်ခြင်း
တကယ်လို့ Appearance ထဲမှာ (System > Preferences > Appearance) ရှိတဲ့ Visual Effects settings ထဲမှာ Custom option ကိုလုပ်ဆောင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ CompizConfig Settings Manager နဲ့ extra Compiz-Fusion plugins တွေလိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီ CompizConfig Settings Manager နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီနေရာမှာ အကျယ်ရေးထားခဲ့ပြီးပြီမို့လို့ ထပ်ပြီး မဖော်ပြတော့ပါဘူး။
compiz-fusion-plugins-extra ကို ဒီနေရာကနေ install လုပ်ဆောင်ပါ။
simple-ccsm ကို ဒီနေရာကနေ install လုပ်ဆောင်ပါ။
compizconfig-settings-manager ကို ဒီနေရာကနေ install လုပ်ဆောင်ပါ။
အလှအပကတော့ ဘယ်သူမဆို ကြိုက်တယ် - ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်ပါတယ် - ကိုယ့်ကွန်ပြူတာအတွက် Themes အလန်းလေးတွေ ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို လိုချင်ကြပါတယ်။ အဲ့အတွက်လှတပတ themes တွေလိုချင်သူများ themes packages တွေ အများအပြားရှိတဲ့ နေရာတွေကို ကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးပါ့မယ်။ အဲ့ဒီ့ themes တွေကတော့ Bisigi Project themes တွေပါ။ Linux distribution အလိုက် ဘယ် distribution မှာဆိုရင်တော့ ဘယ်လို Install လုပ် ဆိုတာ install ဆိုတဲ့ Menu အောက်မှာ ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြား themes တွေကိုလည်း GNOME-Look မှာ ရှာဖွေနိုင်ပါသေးတယ်။
bisigi-themes community-themes gnome-backgrounds gnome-colors gnome-themes gnome-themes-extras gnome-themes-more metacity-themes shiki-colors များကို ဒီနေရာကနေ လည်း install လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Electric Sheep ဆိုတာ screensaver ကို geometric shapes လို့ ပြောလို့ ရတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ contour lines တွေနဲ့ ဖော်ပြပေးပါတယ်။ Electric Sheep (version 2.7) ကို ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ်ချလို့ ရပြီး install လုပ်ဆောင်နည်းကတော့ Linux မှာ ဆိုရင် ~/.electricsheep ကို extract လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ - အသေးစိတ် ညွှန်ကြားချက်ကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
electricsheep ကို ဒီနေရာကနေ လည်း install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
နမူနာပုံစံကို ကြည့်ချင်ရင် ဒီအောက်က ဗွီဒီယိုလေးကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
Last edited by KznT; 12-11-2010 at 04:41 PM..
ယွန်းယွန်း, ဇေယျာအေး, နိုးတူး, Bayint Naung, bonge, kyaukphyu, minthumon, moe_poung, PyaitSone, sAnDViper
မရေးဖြစ်တာတောင် တော်တော်ကြာသွားပြီ - မရေးဖြစ်ဆို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူနည်းတော့ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါရေးပြီးရင် သိပ်ပြန်မစဖြစ်ဘူး - ဒါပေမယ့်လည်း Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat က October 10, 2010 ဆို ထွက်တော့မယ်။ ကိုယ်တွေက Ubuntu 10.04 မှာ ရပ်နေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး - ဒီအကြောင်းကို တော်တော်လည်း အဆုံးသတ်ချင်နေပြီ။ နောက်ထပ် ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ သစ်လေးလည်း ရှိနေတယ်။ ကျွန်တော့် အထင် နောက်ထပ် ၂ ခါလောက် ရေးပြီးရင်တော့ ဒီ Ubuntu 10.04 အတွက် လမ်းညွှန်လေး အဆုံးသတ်လို့ ရလောက်ပါပြီ။ အဲတာကြောင့် ဒီနေ့ မဆိုစလောက်လေး အားနေတာနဲ့ ရေးလက်စလေး ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါကတော့ Ubuntu မှာ တောက်တိုမယ်ရ အသေးသုံး Applications လို့ ပြောရမယ့် Applications ခပ်သေးသေးတစ်ချို့ အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ အသေးသုံး Applications လို့သာ ပြောတာ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ Windows မှာပဲ ကြည့် ကြည့် တစ်ခြား ဘယ် OS မှာပဲ ကြည့်ကြည့် ဒီ အသေးသုံး Applications လေးတွေ မရှိပြန်ရင်လည်း ကိုယ့် ကွန်ပြူတာက သုံးရ အဆင်မပြေပြန်ဘူး - ဥပမာ ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ Window မှာဆို Ccleaner တို့ Defragler တို့ စသဖြင့် ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ - မသုံးပဲ နေတော့ မရဘူးလား မဟုတ်ဘူး ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို မသုံးပြန်ရင်ကျတော့လည်း ဖြတ်လမ်းက သွားလို့ ရတာကို လမ်းရိုးကြီးအတိုင်း တစ်ကွေ့ တစ်ပတ်ကြီး သွားနေရသလိုပေါ့ - ရောက်မယ့် နေရာကတော့ ဒီနေရာပဲ - ဒါ့ကြောင့် အသေးသုံး Applications လေးတွေဟာ မသုံးလည်း ဖြစ်ပေမယ့် သုံးလိုက်ရင်ကျတော့ ကိုယ့် Computer လေးကို ပိုပြီး အသုံးတည့်သွားစေပါတယ်။ အသုံးပြုရလည်း လွယ်ကူသွားစေပါတယ်။
ဒီ အကြောင်းက ကျွန်တော် ရေးထားပြီးသား ဖော်လည်း ဖော်ပြထားပြီးသား - ဒါပေမယ့် လမ်းကြုံနေတာနဲ့ တစ်ခါတည်း ပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းမှာ တော်တော်များများ လူကြိုက်များလာတာ Mac OS X သူ့ အပြင်အဆင်လေးတွေ - Windows နဲ့ မတူတဲ့ အသုံးချပုံလေးတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့လည်း ကောင်းသလို - အသစ်အဆန်းလို ဖြစ်နေတော့ လူတိုင်းလည်း စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ အထဲထဲက အပြင်အဆင်တွေ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုကောင်းတယ် - ဘယ်ကောင်ကတော့ Windows ထက် ပိုသာတယ် - ဘယ်ဟာကတော့ နဲနဲလေး သုံးရတာ ကသိကအောက် ဖြစ်တယ် ဆိုတာ လူတော်တော်များများ သတိမထားမိကြပေမယ့် Mac OS X ရဲ့ အပေါ်ယံ ကြည့်တာနဲ့ စွဲမက် ချင်စရာကောင်းတာလေး တစ်ချက်က သူ့မှာ ပါတဲ့ Dock ပါ။
ဒါကို လူတော်တော်များများလည်း သဘောကျကြသလို ကျွန်တော်လည်း သဘောကျတယ်။ ဒီလို Dock မျိုး ပုံစံတူ သုံးစွဲ ချင်သူတွေအတွက် Avant Window Navigator ( AWN ) ကို သုံးစွဲ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
awn-settings ကို ဒီနေရာကနေလည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
Application Launcher ဆိုတဲ့ သဘောကို နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် application တွေ document တွေကို သက်ဆိုင်ရာ Files တွေ Applications တွေရဲ့ name ရှေ့စာလုံး အနည်းငယ် ရိုက်ယုံနဲ့ အလွယ်တကူ ခေါ်ယူအသုံးပြုလို့ ရစေမယ့် program မျိုးကို ခေါ်ပါတယ်။ Kupfer - ဆိုတာအဲလို အရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝတဲ့ Application Launcher တစ်ခုပါပဲ။
kupfer ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
တကယ်လို့ Kupfer ကို မသုံးချင်ရင် သူ့ထက် နဲနဲလေး ပိုလှတဲ့ GNOME+Do ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
gnome-do ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
Paste မလုပ်ခင်မှာ Copy လုပ်ထားတဲ့ Source ကို ပိတ်လိုက်ရင် Copy/Paste လုပ်လို့ မရတဲ့ ပြဿနာ တစ်ခု 2004 ခုနှစ် ကုန်ပိုင်းလောက်က ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ Parcellite ဆိုတာ အဲလို ပြဿနာတွေရဲ့ ကြားထဲမှာ Features ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ အသုံးပြုလို့ ကောင်းတဲ့ clipboard manager တစ်ခုပါပဲ။
parcellite ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
Universal Applets ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ Windows တွေမှာ ပါတဲ့ Widgets လေးတွေ သုံးနိုင်အောင်ပါ။ သူ့ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ "widgets" for Linux" လို့ ခေါ်ရမှာပေါ့ - Screenlets တို့ gDesklets တို့ နောက်ထပ် Release တွေ မထွက်တော့တဲ့ နောက်မှာ Universal Applets က ပေါ်ထွက်လာတာပါ။ ဒါပေမယ့် Universal Applets အတွက် main developer က လတ်တလော အခြေအနေမှာ ဒီ project ကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မအားမလပ် ဖြစ်နေတာကြောင့် နောက်ထပ် သူ့နေ့ရာမှာ အစားထိုး လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် သူတစ်ယောက်ယောက်ကို ရှာဖွေနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တကယ်လို့ သုံးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အရင်တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ version ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
APT line: deb http://download.opensuse.org/reposit.../xUbuntu_9.10/ ./
universal-applets ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
Last edited by KznT; 12-11-2010 at 04:55 PM..
ကိုဦး, ယွန်းယွန်း, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသူအောင်, ဇေယျာအေး, Bayint Naung, bonge, hellboy, kyaukphyu, lu soe, minthumon, moe_poung, nainglynn, PyaitSone, tu tu
ဖျော်ဖြေရေး - မျှဝေရေး - ပြင်ဆင်ရေး နှင့် လုံခြုံရေး ကဏ္ဍများ
Audio Recording လုပ်ဖို့နဲ့ လုပ်ထားပြီးသားတွေကို Edit လုပ်ဖို့များ ဝါသနာ ပါကြမလား မသိဘူး - ဒီလိုဆိုရင် Jokosher ကောင်းပါတယ် - ဘယ်လိုကောင်းတယ် ဆိုတာတော့ စမ်းသုံးကြည့်မှပဲ ပြောလို့ရမှာပါ - တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်း မတူတော့အရမ်းကြီး စွတ်မြှောက်လို့လည်း မရပြန်ဘူး
Jokosher ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
PiTiVi အကြောင်းက အရင်က ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ စာတွေမှာလည်း ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါပြီ - သူက အသုံးပြုရလွယ်တယ် - နောက်ပြီး feature စုံတဲ့ movie editor လို့ ပြောလို့ ရပါတယ် - PiTiVi က အခု Ubuntu ထဲမှာ default အနေနဲ့ ပါလာပြီးသားပါ - ဒါပေမယ့် Update ကျကျ သုံးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ repository ထဲမှာ ထည့်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေကျရင် တစ်ယောက်ယောက်က ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် ဆိုတာ နားမလည်လို့ ရှင်းပြရတဲ့ အခါ စာနဲ့ ရှင်းရင် အရမ်းရှည်လျား ထွေပြားနေမယ့် အကြောင်းအရာမျိုးက ကိုယ့် Desktop ကို records လုပ်ပြီး ပြလိုက်ရင် ပိုလွယ်ပြီး မြန်ပါတယ်။ အဲ့အတွက်တော့ Istanbul ရှိပါတယ် -
Istanbul ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
Player တွေကတော့ တော်တော်ပေါပါတယ် - ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တော့ vlc ပဲ သဘောကျတယ် - သူ့မှာ plug-ins တွေလည်း မနည်းမနောပါသလို တစ်ခြား functions တွေလည်း တော်တော်များများပါပါတယ် - vlc ကို Ubuntu Software Center ကနေ install လုပ်ဆောင်လို့ ရသလို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နေရာကနေလည်း install လုပ်လို့ ရပါတယ်။
vlc ကို ကို ဒီနေရာကနေ install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ webcam ရှိတယ် - ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကိုယ့် webcam သုံးပြီး တစ်ခြားသူ တစ်ယောက်ကို ပြဖို့ဆို Cheese ရှိထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် - သူ့ကို သုံးပြီး ဓာတ်ပုံတွေ - ဗွီဒီယိုတွေ webacm ကနေ အားလုံး ရိုက်လို့ ရပါတယ်။
Cheese ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူဘူး - တစ်ချို့က ကိစ္စတစ်ခုခု ရှိရင် Alarm မလိုပဲ ကိုယ့်ဘာသာ အချိန်ညှိပြီး လုပ်တတ်တယ် - တစ်ချို့ကတော့ Alarm လေးနဲ့မှ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို ချိန်ကိုက်ပြီး လုပ်တတ်တယ် - အဲလို Alarm လိုသူတွေ အတွက် ကိုယ့် ကွန်ပြူတာကိုလည်း အမြဲ ဖွင့်ထားနိုင်မယ် ဆိုရင် alarm clock ရှိပါတယ် -
Alarm-clock ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
Scribus က desktop publishing (DTP) application မို့လို့ စာစီစာရိုက် သမားတွေ နောက်ပြီး ဘောက်ချာ - စာ - သတင်းစာ - ပိုစတာ - စာအုပ် စသဖြင့် ပုံစံလှလှ professional ကျကျ ထုတ်ဝေလိုသူတွေ အတွက် အသုံးတည့်ပါတယ် -
Scribus ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
Games အကြောင်းကလည်း မပါလို့ မဖြစ်ဘူး - ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က ဂိမ်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိပ်မကျွမ်းကျင်သလို အမြဲလည်း ဆော့လေ့ မရှိတာ မို့လို့ ဘယ် ဂိမ်းတွေ ကောင်းတယ် ဆိုတာ အများကြီး သိပ်မသိပါဘူး - ဒါပေမယ့် ဆော့ချင်ရင် ဘယ်လို လုပ်ရမယ် ဆိုတာတော့ လေ့လာထားပါတယ် - ကျွန်တော်က ဂိမ်းသေးသေးလေးတွေ ( ကလေးဂိမ်း ) လောက်ပဲ ဆော့ဖြစ်တယ်။ ဘာပဲဆော့ဆော့ PlayDeb ဆိုတာ Games တွေရဲ့ repository ပါ - သူက Ubuntu repos ထဲမှာတောင် မပါတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဂိမ်းတွေ ဆော့လို့ ရပါတယ်။ PlayDeb.net မှာ တစ်ခုချင်းစီ လိုက်ရှာပြီး install လုပ်နေရတာထက်တော့ PlayDeb package က အများကြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကို >> PlayDeb package install လုပ်ပါ။
တစ်ချို့က Windows Gamers တွေ - Linux ဂိမ်းတွေဆို သိပ်လည်း မရင်းနှီးကြသလို သိပ်လည်း မဆော့ချင်ကြဘူး - ဒီလိုဆိုရင် Windows Games တွေကို Linux မှာ ဆော့နိုင်ဖို့ PlayOnLinux ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်က Gamer မဟုတ်တော့ CallofDuty - Prince of Persia - Civilization - စသဖြင့် ဆော့လို့ ရတယ် ဆိုတာပဲ သိတယ် - အသေးစိတ် လုပ်ဆောင်ပုံကိုတော့ မလေ့လာထားဘူး - ဒါပေမယ့် ခက်ခက်ခဲခဲ မရှိပါဘူး - Just Google it! ပါပဲ -
Playonlinux ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
Filesharing နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောစရာ တော်တော်များများတော့ ရှိပါတယ် - ဒါပေမယ့် လူသုံးများတဲ့ လိုအပ်တာလေးပဲ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အရင်တည်းက စပြီး ခုချိန်ထိ Filesharing လုပ်ဆောင်ရာမှာ လူသုံးများနေတဲ့ Torrent လမ်းကြောင်းပါ - ကျန်တဲ့ Filesharing လမ်းကြောင်းတွေက ပိုက်ဆံပေးရတာတွေလည်း ရှိသလို အလကား သုံးမယ် ဆိုရင်လည်း အလုပ်တော်တော်ရှုပ်ပါတယ် - Transmission က အခု Ubuntu ထဲမှာ default အနေနဲ့ ပါလာပြီးသားပါ - ဒါပေမယ့် Update ကျကျ သုံးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ repository ထဲမှာ ထည့်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
သူကတော့ မရှိမဖြစ် အရေးကြီးပါတယ် - Backup ရဲ့ အရေးပါပုံ တော်တော်များများကို ဖိုရမ်မှာလည်း ခေါင်းစဉ် အမျိုးမျိုးနဲ့ ရေးခဲ့ပြီးသားမို့ ထပ်ပြီး မဖော်ပြတော့ပါဘူး - ထပ်မံလေ့လာလိုသူများ ကျွန်တော် ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ စာတွေထဲမှာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် - သူ့ရဲ့ ကောင်းကျိုးကို အတိုချုပ်ရရင်တော့ Backup လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် အရေးကြီးတဲ့ Data တွေ မျှော်လင့် မထားတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုကြောင့် မဆုံးရှုံးရတော့ဘူးပေါ့ -
Backintime-gnome ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Windows မှာ သုံးတဲ့ Paragon တို့ - Partition Magic တို့လိုပေါ့ - ကွာခြားတာက Windows မှာဆိုရင် Apps တစ်ခုခု သုံးလို့ ကောင်းရင် ပိုက်ဆံနဲ့ ပေးဝယ်ရတယ် - ဒီ Gparted ကတော့ ပိုက်ဆံနဲ့ ပေးဝယ်စရာလည်း မလိုဘူး - key - crack သုံးဖို့လည်း မလိုဘူး - Always free -
Gparted ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
Virtual machine ဆိုတာ သာမန် ကွန်ပြူတာကို ဖျော်ဖြေရေးလောက် သုံးသူတွေ သုံးလေ့ မရှိပါဘူး - သူ့အကြောင်းကို ဖိုရမ်မှာ ဆွေးနွေးထားတဲ့ နေရာတော်တော်များများ ရှိပါတယ် - နားလည်လွယ်အောင် ဥပမာ ပေးရရင် ကျွန်တော်တို့က လတ်တလော Windows Vista သုံးနေတယ်ထား - သူများတကာတွေက Windows7- Windows7နဲ့ တတွတ်တွတ် ပြောနေကြလို့ ကိုယ်လည်း Windows7စမ်းကြည့်ချင်ပါပြီ တဲ့ - ဒီလိုဆို ပုံမှန်တွေးကြည့်ရင် လုပ်ဆောင်စရာ နှစ်လမ်းပဲ ရှိတယ် - HD မှာ Partition နောက်တစ်ခု ထပ်ခွဲပြီး Windows7တင်ချင်ရင်တင် - ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိ Windows ကြီး ဖြုတ်ချပြီး Windows7တင်ရင်တင် - ဒီလိုနည်းတွေ ရွေးရပါလိမ့်မယ် - ခု ပုံမှန် မတွေးတော့ဘူး - အဲ့လိုဆို နောက်ထပ် ရွေးချယ်စရာ တတိယနည်းလမ်းရှိလာပါပြီ - အဲတာက Virtual machine ကို သုံးတဲ့နည်းလမ်းပါ - သူ့ကို သုံးရင် OS တွေ တစ်ခုကနေ တစ်ခု စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့ နေရာမှာ နဂိုရှိရင်းစွဲ Windows ကို ဘာမှ မထိခိုက်ပဲ နောက် OS တစ်ခုကို စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ Virtualbox ကို Ubuntu Software Center ကနေ install လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။
တစ်ချို့ကို လုံလုံခြုံခြုံလေး နေချင်ကြတယ် - ဒီလိုဆို Firewall ရှိဖို့လိုပါတယ် - Windows လိုမျိုး သိပ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး မရှိသလို တော်ယုံလည်း သိပ်သုံးလေ့ မရှိကြပါဘူး - သုံးချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နေရာကနေသာ install လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ -
Gufw ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
Linux မှာ antivirus က ပုံမှန်အားဖြင့် သုံးဖို့ မလိုပါဘူး - ဒါပေမယ့် Windows မှာသုံးလာတာကို စိတ်စွဲနေသူတွေ အတွက် စိတ်အဆာပြေ Antivirus တွေတော့ ရှိပါတယ်။ တစ်ခုတည်းပဲ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ ClamTK Virus Scanner ပါ။
Clamtk ကို ဒီနေရာကနေ လည်း Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းကို ရေးခဲ့တာ လနဲ့ချီနေပါပြီ - ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် - ဒီအကြောင်း အရာတွေက Ubuntu နဲ့ လုံးဝစိမ်းနေသူ တစ်ယောက်အတွက် စတင်အသုံးပြုရာမှာ အထောက် အပံ့ဖြစ်အောင် ရေးထားတာမျိုးပါ - ဒါ့ကြောင့် အရမ်းအပြည့်အစုံကြီး မဟုတ်ပါဘူး - သူ့ထက် သူ့ထက် ကောင်းတဲ့ Apps တွေလည်း ရှိသေးသလို - ဖော်ပြပါ နည်းတွေနဲ့တင် မဟုတ်ပဲ တစ်ခြား နည်းလမ်းတွေနဲ့ ရယူလို့ ရတာတွေလည်း ကျန်ပါသေးတယ် - အဲတာကိုတော့ Ubuntu ကို လက်တွေ့ စမ်းသပ်ကြည့်ရင်း လေ့လာယူကြဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
Last edited by KznT; 13-11-2010 at 03:00 PM..
ကိုစံငြိမ်း, မျိုးဟန်ထက်, ယွန်းယွန်း, လမ်းပြကြယ်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသူအောင်, အောင်လံလေး, Bayint Naung, bonge, hellboy, ko myo, kyaukphyu, kyawminkhoung, lu soe, minthumon, PyaitSone, tu tu, yawnathan
အကို ကျွန်တော် Ubuntu 11.4 ကိုသုံထားပါတယ် အကို system>preference>appearance ထည်မှာ click နှိပ်ပြီတော့လုပ်လိုတ်ရင် Desktop Effect ထည့်သာမပါဘူး အကိုဘယ်လို့လုပ်ရမလဲ အရင် 9.04မှာတုန်ကပါတယ်ကို နောက်ပြီတော့
The installation or removal ofasoftware package failed လို့်ပြနေတယ် အကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အခုမ Ubuntu ကို စလေ့လာနေသာမို့လို့ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ thurawin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Ubuntu 11.04 မှာက Desktop Effect ပြောင်းချင်ရင် Compiz Config Settings Manager မှာ သွားပြောင်းရပါမယ်။ တကယ်လို. Install လုပ်တုန်းက မပါလာဘူးဆိုရင် Software Manager နဲ. Install လုပ်ပေးရပါမယ်။ အဲဒီမှာ Desktop Effects နဲ. ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ် ပြင်လို. ရပါတယ်။ Ubuntu 11.04 ကတော. စထွက်လာ ကတည်းက Bugs တော်တော် များပါတယ်။ ကျွန်တော် USB ထဲ ထည်.သုံးသလောက် အကိုပြောတဲ. Error မျိုး ခဏခဏ ပြပါတယ်။ တခါတလေ Error ပြပေမဲ. software က သုံးလို. ရနေတာလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို. ကွန်ပျူတာထဲ Install လုပ်ပြီး သုံးတာဆိုရင် (Wubi/USB နဲ. သုံးတာ မဟုတ်ရင်) Update လုပ်ပြီးမှပဲ softwares ကို သွင်းပါလို. အကြံပေးပါရစေ။ Synaptic Package Manager ကို ဖွင်.ပြီး အောက်ဆုံးမှာ Broken Packages ရှိတယ်လို. တွေ.ရရင် (33333 packages listed, 1555 installed, 1 broken,0to install/upgrade,0to remove) Edit >> Fix Broken Packages ဆိုပြီး လုပ်သင်.ပါတယ်။
Last edited by g00gle; 12-08-2011 at 01:30 AM..
မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, bagothar85, bonge, minthumon
31-08-2011, 10:49 AM
အကို ကျွန်တောလုပ်သာ Don't enable Rotat Cube ပဲ ပြနေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါအုန်နော်
31-08-2011, 12:08 PM
ဒီနည်းနဲ. အဆင်ပြေမယ် ထင်တယ် အကို။
ကျွန်တော်...ubuntu မှာ pidgin(instant message)ကို install ထည့်သွင်းချင်ပါတယ်...အခုမှစလေ့လာကာစမို့ဘာမှမတတ်ပါဘူးခင်ဗျာ...အဲဒါလေး ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲဆိုတာ..ကူညီပေးကြပါOီး ခင်ဗျာ....လေးစားစွာဖြင့်....
Ubuntu & Software management
စနိုးလေး, အယ်သား, bagothar85, KznT, minthumon, PyaitSone, zo
Ubuntu 11.04 (Natty) မှာ Desktop Effect က ကျွန်တော် လုပ်တာမရပါဘူး။ Compiz Config Setting Manager သွင်းပြီး လုပ်ပေမဲ. တခုခုကို Enable လုပ်လိုက်ရုံနဲ. Unity က Crash ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘယ်လိုမှလဲ ပြန်လုပ်လို. မရဘူး။ Profile ကို Restore လုပ်မှပဲ ရတယ်။ အရင်က သူများတွေ လုပ်လို.မရဘူး ပြောနေတာ ပထမက သေချာမစမ်းလို.ပဲ မှတ်နေတာ။ ကျွန်တော် လုပ်တော.လဲ Crash ဖြစ်နေတာနဲ. လုပ်လို. မရဖြစ်နေတယ်။
ဒါနဲ. Ubuntu Classic ကို ပြန်ပြောင်းပြီး စမ်းတော. ရတာတွေ.ရတယ်။ Ubuntu Classic ပြောင်းဖို. Login Screen ဆိုတာကို run ပေးပါ။ Select .... as default session ဆိုတဲ. နေရာမှာ Ubuntu Classic ကို ရွေးပေးပါ။ ဒါဆို အရင်က ubuntu တွေလို ဘယ်ဘက်ထောင်.မှာ Bar (unity) မပါတဲ. ubuntu ကို ရပါမယ်။ Ubuntu Classic က ၀င်ပြီး Animations/Effects တွေလုပ်ရင်တော. ရပါတယ်။
Effects တွေကတော. ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည်.မှပဲ သိပါမယ်။ မစမ်းခင် လိုလိုမယ်မယ် Profile ကို Backup လုပ်ပေးပါ။ Compiz Config Setting Manager ကို ဖွင်.လိုက်ရင် အောက်နားမှာ Preferences ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို click လုပ်ပါ။
ပြီးရင် Export ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဖိုင်နေရာ ရွေးပြီး သိမ်းထားလိုက်ပါ။ တခုခု မှားသွားရင် Import ကနေ ခုနက Save လုပ်ထားတဲ. ဖိုင်ကို ပြန်ရွေးပေးပါ။ ခဏစောင်.ပြီး Compiz ကို ပိတ်၊ ဖွင်.လိုက်ရင် နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားပါမယ်။ Restore to defaults ရှိပေမဲ. တခါတလေ အလုပ်မလုပ်လို. Profile Export လုပ်ခိုင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်က မေးတဲ.သူအားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ဘယ်နှစ်ခါတောင် ပြန်သွင်းလိုက်ရလဲ မသိဘူး။
Last edited by g00gle; 24-09-2011 at 07:16 AM..
စနိုးလေး, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, bagothar85, bonge, htoo war, KznT, minthumon
29-12-2011, 11:49 AM
အကိုတို့ရေ လုပ်ပါဦး ubuntu 11.4 သုံးပါတယ်.ခုမှစပြီးသုံးတာပါ.zawgyi မတင်တတ်ဘူး.သင်ပါဦး.ပြီးတော့ os တင်တာလဲ အကိုတို့ပြောတာနဲ့မတူဘူး.ဒါပေမဲ့ပြီးတော့သွားတယ်.ပြီးမှဘာတွေဖြစ်ဦးမယ်မသိဘူး.zawgyi တင်ပြီးမှ ကျန်တာတွေလုပ်လို့ရမယ်ထင်တယ်.ကျွန်တော်က ubuntu ကနေ ဖိုရမ်ကိုဖွင့်တော့မြန်မာလိုတွေမပေါ်လို့ပါ.ကူညီကြပါဦးနော်.မြန်မြန်လေး။
မျိုးဟန်ထက်, bagothar85, mr.jittwo, thureinsoe, tu tu
Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat ၏ ဆန်းသစ်မှုများ KznT Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ211-01-2011 12:18 PM